ကားပျေါက ကောငျဆိုးလေး – My Blog
ကားအခြိနျအကွာကွီးစီးရမှာကိုတှေးပွီး ကြှနျမရငျမောမိတယျ။ ကားစီးရငျ ကြှနျမက မူးတကျတယျလေ။ ကားထှကျခါနီးမှ ကားပျေါတကျထိုငျတယျ။ ပွူတငျးပေါကျကိုဖှငျ့ထားပွီး ခေါငျးကို အပွငျနဲနဲထုတျထားလိုကျတယျ။ ဘေးခုံက လူမရှိတေါ့ နရေတာခြောငျခြောငျခြိခြိပဲ ။ “အးးးး” ကားစထှကျမှလူတဈ ယောကျပွေးတကျလာပွီး ကြှနျမ ဘေးမှာ ဝုနျးဆို ခပျကွမျးကွမျးထိုငျခလြိုကျတယျ။ ပွီးတော့ sorryပါလို့ ကြှနျမကိုတောငျးပနျတယျ။ သူ့ပုံစံကွညျ့ပွီး ကြှနျမလညျး စိတျပွလေိုကျတာပေါ့။ မွငျ့မားသောအရပျနှငျ့လိုကျဖကျစှာ ခန်ဓာကိုယျက ကွံ့ခိုငျတောငျ့တငျးသညျ။ ကားမီးရောငျအောကျမှာ အသားအရညျက ဝငျးနသေညျ။ ထူထဲတဲ့မကျြခုံး နှာတံခြှနျခြှနျ သသေပျတဲ့နှုတျခမျး လေးထောငျ့ဆနျတဲ့မေးရိုးတှနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ သူ့ပုံစံလေးက ကြှနျမထကျ ၄နှဈ ၅နှဈ တော့ ငယျမညျထငျပါသညျ။ အလနျးစားလေးနဲ့တဈညလုံးကားတူတူစီးရမယျ့အရေးကို တှေးပွီး ကားမူးတောငျပြောကျသှားသလိုပဲ။ ကားပျေါမှာပွတဲ့ မွနျမာကားကို ကွညျ့နတေုနျးသူက စကားစပွောလာသညျ။
“ရနျကုနျထိလား အဈမ” “အငျး…. မငျးရော” “ကြှနျတျောလညျး ရနျကုနျထိပဲ.. ဒါနဲ့ အဈမက တဈယောကျထဲလား.. ခြောခြောလှလှလေးတဈယောကျထဲ ခရီးမသှားသငျ့ဘူးဗြ” ကြှနျမမကျြလှာခထြားမိသညျ။ ခပျခြောခြောကောငျလေးက ဘေးနားမှာထိုငျပွီး ကိုယျ့ကိုစိုကျကွညျ့ပွီး လှတယျပွောတာ ရငျမခုနျဘဲ နပေါ့မလား။ “ကြှနျတျော အဈမကို မွငျမွငျခငျြး ခဈြမိသှားပွီ အဈမရယျ” “အို….. မဖွဈနိုငျတာ” မိနျးမသားမို့သာ အစဉျလာအရမူမိပမေယျ့ ကြှနျမ ကိုယျတိုငျက ဒီကောငျလေး မဆှတျခငျက ညှတျခငျြနတော။ “ယုံပါအဈမရယျ… နျော” “အို….လှတျပါ… လူတှမွေငျကုနျလိမျ့မယျ” “လှတျဖူးဗြာ ခဈြတယျ ပွောမှ လှတျမယျ” “အငျးကှာ…. ခဈြတယျ…. ခဈြတယျ… ကဲ… ကနြေပျပွီလား လူဆိုးလေး “ ကောငျလေးက မပွောမဆို ဆှဲဖကျထားတော့ ကြှနျမဖွငျ့ အသကျရှုတောငျကွပျတယျ။ ခဈြတယျလို့ ဇှတျပွောခိုငျးတော့ ကြှနျမလိုကျလြောလိုကျရတာပဲလေ။ နဲနဲလြော့သှားပမေဲ့ သူက ကြှနျမကိုဖကျထားတုနျးရယျ။
“ရှတျ” “အို… “ ကားမီးလညျးပိတျသှားရော သူကကြှနျမပါးကိုနမျးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမနှုတျခမျးလေး ဖိကိုကျတယျ။ နှုတျခမျးတဈခုလုံးကို စုပျယူပွီး သူ့လြှာလေးကို ကြှနျမပါးစပျထဲရောကျအောငျထိုးထညျ့တယျ။ နမျးတာမြား ကြှမျးလိုကျတာရှငျ။ လူကိုမူးမရေ့မတကျပဲ။ ကြှနျမက အပြိုကွီးဆိုတော့ အဲ့လို နှုတျခမျးခငျြးနမျးတာကို ကိုရီးယားကားထဲမှာပဲ မွငျဖူးတာလေ။ အခုကိုယျတှဆေို့တော့ ရှိနျးတိနျးဖိနျးတိနျးကွီး။ သူ့လြှာကို ကြှနျမပါးစပျထဲထိုးသှငျးတော့ ကြှနျမက စုပျယူလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ သူက ကြှနျမလြှာကိုပွနျစုပျယူပွနျတယျ။ ကြှနျမတို့ရဲ့လြှာတိုကျပှဲမှာ ကြှနျမပဲ နှမျးလခြဲ့ရတယျ။ သူ့လကျက အငွိမျမ နဘေူး။ ကြှနျမရဲ့ နို့အုံတငျးတငျးလေးကို အင်ျကြီပျေါက ပှတျနတေယျ။ ကြှနျမက နို့ကွီးတာရော ဘျောလီအုံက ထူတာရောကွောငျ့ သူ့လကျနဲ့တောငျ မဆနျခငျြ ဘူး။
“အို…. မလုပျနဲ့လေ” ကြှနျမရဲ့တားမွဈသံကို ဂရုမစိုကျစှာဘဲ ကောငျဆိုးလေးက ကြှနျမရဲ့ဘျောလီခြိတျတှကေို ဖွုတျပဈလိုကျတယျ။ အင်ျကြီအောကျကနလေ ကျလြိုပွီး ဘယျသူမှ မထိမတှဖေူ့းတဲ့ ကြှနျမရဲ့ နို့အုံလေးကို ပယျပယျနှယျနှယျ ညှဈပါတော့တယျ။ သူ့ရဲ့တောငျ့တငျးခိုငျမာတဲ့ လကျကွီးရဲ့ ကိုငျတှယျမှု အောကျမှာ ကြှနျမနို့အုံလေးက ကွမှေလုမတကျ။ နာလညျးနာ ကောငျးလညျးကောငျး။ ငွီးသံထှကျမှာစိုးလို့ ကြှနျမနှုမျခမျးကို အသလေိုကျထားရတယျ။ ကြှနျမထိနျးသိမျးခဲ့တဲ့ နို့လှလှကွီးတှကေို ခုတောလညျး နာမညျတောငျမသိတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ မညှာမတာကိုငျညှဈနတောကို ကွညျဖွူစှာ အကိုငျ ခံနသေညျ။
“အု… အား…” အသံထှကျသှားပွီးတော့မှ ကြှနျမပါးစပျပွနျပိတျလိုကျရသညျ။ မအျောဘဲနနေိုငျပါ့မလား။ ကြှနျမရဲ့ နို့သီးသေးသေးလေးကို သူ့ရဲ့ ကွှကျသား အဖုဖုရှိတဲ့လကျကွီးနဲ့ အားကုနျညဈပဈလိုကျတာလေ။ နာလှနျးလို့ နို့သီးလေးကို ညှဈခနြေတေဲ့ သူ့ရဲ့လကျကို ကြှနျမဆှဲဖယျပမေဲ့ သူ့လကျကယအားသနျ လှနျးတော့ မဖယျနိုငျဘူး။ သူက ကြှနျမနို့သီးလေးကို လကျညှိုးလကျမနဲ့ ညှဈပွီး ဆှဲဆှဲပွီးခနြေသေေးတယျ။ နာတယျထငျပမေယျ့ ကြှနျမစောကျဖုတျဝဆီ က ဆဈကနဲ ဆဈကနဲ ဖွဈပွီး အရညျတှေ တျောတျောရှဲလာတယျ။ ကြှနျမရဲ့ထမိနျလေးကိုဖွညျပွီး ကြှနျမစောကျဖုတျကို စမျးတယျ။ “ဘောငျးဘီခြှတျလိုကျ နျော… မမ” ကောငျလေးရဲ့အမိနျ့အတိုငျး ကြှနျမခြှတျပေးလိုကျတော့ ကောငျလေးလကျလေးတှကေ ကြှနျမရဲ့စောကျစိလေးကို ဖှဖှပှတျပေးတယျ။ ကားပျေါ မဟုတျဘဲ အခနျးတဈခုခုထဲသာဖွဈလို့ကတော့ ကြှနျမကပွဲလနျနအေောငျ အျောငွီးမိမညျ။ ခုတော့ လကျကိုကိုကျထားပွီး ကြိတျခံနရေသညျ။
“အငျ့… ဟငျ့…” ကြိတျခံနရေငျးမှပငျ အသံလေးမြားထှကျမိသှားသညျ။ စောကျစိကို နာနာလေးဖိပှတျပေးတော့ စောကျဖုတျထဲက အရညျလေးမြားစိမျ့ထှကျ လာကာ ပွီးသှားတော့ နို့သီးလေးတှတေောငျ ထောငျနသေညျ။ ကောငျလေးရဲ့ရငျခှငျထဲမှာ ကောငျလေးကိုဖကျပွီး ကြှနျမအနားယူနပေမေယျ့ ကောငျလေးရဲ့ လကျက ကြှနျမစောကျပကျထဲမှာ အနားမယူသေးဘူး။ ကြှနျမရဲ့ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကို ပှတျလိုကျ ညှဈလိုကျ စောကျမှေးလေးတှကေို ဆှဲလိုကျ လုပျနတေယျ။ လကျခလယျလေးကို ကြှနျမစောကျပကျခေါငျးထဲ ထညျ့တော့ အျောမိမှာစိုးလို့ ကောငျလေးပုခုံးကိုကိုကျထားရတယျ။ လကျလေးနဲ့ အဝငျအထှကျ မှနျမှနျလုပျပေးတော့ စောကျဖုတျက မနာတော့ပဲကောငျးလာတယျ။ လကျတဈခြောငျးကနေ နှဈခြောငျးပူးထညျ့လိုကျတော့ ကွပျကွပျထုပျ ထုပျ တဈမြိုးလေး။
တဖွညျးဖွညျးနဲ့ကောငျလေးရဲ့ အဝငျအထှကျတှကေ မွနျလာတယျ။ သလေကျေအောငျကောငျးတာပါပဲ။ အဲ့ဒီနရောတငျ စောကျပကျကိုဖွဲပွီး ကားပျေါက ယောကျြားတှအေကုနျလုံးဝိုငျးလိုးတာကို ခံပွဈလိုကျခငျြတယျ။ ကြှနျမပွီးသှားတော့ကောငျလးက သူ့ကို ဂှငျးထုပေးဖို့ပွောတယျ။ ကြှနျမက အပြိုကွီးဆို တော့ အဲ့ဒါတှသေိပျမသိဘူးလေ။ ကောငျလေးက ကြှနျမလကျကိုကိုငျပွီး သူ့လီးပျေါကိုတငျပွီး သူ့လီးကို ရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျခိုငျးတယျ။ အဲ့ဒါ ဂှငျးထု တာတဲ့။ ကြှနျမလညျးစိတျပါလကျပါ ထုပေးနဖွေဈတယျ။ သူလညျး ကြှနျမလိုပဲ အျောခငျြတာကို မေးရိုးကွီးထောငျအောငျ အံကွိတျထားတယျ။ ကြှနျမ အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ဆောငျ့လိုကျတော့ ကြှနျမနို့တှကေိုလှမျးညှဈရငျး ဆကျဆကျတုနျကာ ပွီးသှားတော့တယျ။
ကားကပေးတဲ့စောငျလေးကို နှဈယောကျတူတူခွုံပွီး နားနတေုနျး ကောငျလေးက ထိုငျခုံအောကျ ကားကွမျးပွငျပျေါ ထိုငျခလြိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမပေါငျနှဈလုံးကိုဖွဲပီး သူ့ခေါငျးဝငျလိုကျတယျ။ ” ရှီး…..အို…..ကြှတျ ကြှတျ..” ကြှနျမစောကျဖုတျလေးကိုဖွဲပွီး စောကျစိလေးကို မလှတျတမျးငုံခဲထားတာ ကြှနျမစောကျစိလေးတောငျ ပွုတျထှကျရမတကျပါပဲ။ စောကျစိလေးကို သှားလေးနဲ့ ကိုကျလိုကျ ခြိုခဉျြလေးလိုစုပျလိုကျလုပျတော့ ခံရခကျလှနျးလို့ သူ့ ဆံပငျတှကေိုတောငျ ဆှဲထားမိတယျ။ သူကတော့ ကြှနျမရဲ့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားထူထူကွီးတှကေို အငမျးမရစုပျနစေဲ။ အသံမွညျအောငျယကျဘဲ စောကျဖုတျကို ဖိဖိယကျတော့ သူ့မေးစကေ့အမှေးငုတျစိလေးတှကေ ကြှနျမစောကျဖုတျတပွငျလုံး ယားကြိကြိဖွဈလာတယျ။ သူ့လြှာလေးကိုလညျး ကြှနျမ စျောခေါငျးထဲ ထိုးထိုးသှငျးတယျ။ ကော့ပွနျနအေောငျ ကောငျးတာပါပဲ ။ကားပျေါမှာ အသံမထှကျရဲတော့ သူ့ဆံပငျတှကေို နာနာဆှဲမိတာပေါ့။
” အို….” ကြှနျမက ဆှဲဖယျပမေယျ့ သူကမဖယျတော့ ကြှနျမစောကျရညျတှေ သူ့မကျြနှာကိုပမျးလိုကျမိတယျ။ သူ့မကျြနှာပျေါက ကြှနျမရဲ့စောကျရညျပူတှကေို တဈရှုးလေးနဲ့ ယုယုယယသုတျပေးနတေုနျး သူက ကြှနျမနှုတျခမျးလေးကို ဆှဲနမျးပွီး နို့သီးဖြားလေးကို ညဈတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကားမီးက လငျးလာ တယျ။ ယာဉျရပျနားစခနျးရောကျလို့ နားတာပေါ့။ သူရော ကြှနျမရော ကားပျေါကဆငျးပွီး အစားစားကွတယျ။ ကားပျေါ လူတှအေားလုံးတကျပွီး ကားစ ထှကျတော့ မီးမှိတျသှားတာနဲ့ ကောငျလေးရဲ့လကျတှကေ ကြှနျမနို့တှပေျေါကို ရောကျလာတော့တာပဲ။ ကြှနျမလကျကိုလညျး သူ့လီးပျေါကို တငျပေးတယျ။ သူတောငျ ကြှနျမကို ယကျပေးသေးတာပဲဆိုပွီး ကြှနျမလညျးရှကျမနတေော့ဘဲ ထိုငျခုံပျေါကဆငျး အောကျမှာထိုငျပွီး သူ့လီးကို စုပျပေးတာပေါ့။
ကြှနျမက သိပျမလုပျတကျပမေယျ့ သူကတော့ ဖီးတကျပွီး မကျြနှာကိုရှုံ့မဲ့လို့။ သူကောငျးတယျဆိုတော့ နာနာလေးဖိစုပျပေးတယျ။ လီးတဈခြောငျးလုံးကို ပါးစပျထဲ ဝငျသလောကျသှငျးပွီးစုပျတယျ။ လီးထဈလေးကို လြှာနဲ့ ပှတျဆှဲတယျ။ လီးရညျတှေ စိုရှနျးနတေဲ့ သူ့လီးထိပျလေးနဲ့ ကြှနျမနှုတျခမျးလေးကို နှုတျခမျးနီ ဆိုးသလို ပှတျတယျ။ “အား…….” အျောလိုကျမိတာ ကြှနျမ။ ကြှနျမတုနျးက သူ့ဆံပငျဆှဲသလို သူလညျး ကြှနျမရဲ့ တငျပါးဖုံးအောငျရှညျတဲ့ဆံပငျ ကို သူ့လကျနဲ့ တငျးနအေောငျရဈကိုငျထားတော့ နာတာပေါ့။ ပွီးတော့ လကျတဈဖကျကလညျး ကြှနျမနို့အုံကွီးကို တအားညဈနသေေးတယျ။ ဘယျသူမှ မ ကိုငျဖူးတဲ့ အပြိုနို့အုံတငျးတငျးအိအိလေးကို သူ့ဗလကွီးနဲ့ မညှာမတာညှဈခနြေတောခံရတာ တခကျြတခကျြ အသကျရှုရပျသှားမတကျပဲ။
စောစောက သူ့လီးကို ကြှနျမက စုပျပေးတာ။ အခုသူက လီးကိုကော့ကောထိုးပွီး ကြှနျမပါးစပျကို လိုးနတော။ သူ့လီးကွီးကရှညျတော့ ကြှနျမအာခေါငျကို ထောကျထောကျမိတာ မကျြရညျတောငျ ဝိုငျးတယျ။ သူ့အားကွီးကသနျတော့ ရုနျးလို့လညျး မရဘူး။ ဆံပငျဆောငျ့ဆှဲပွီးပါးစပျကိုဆောငျ့လိုး နို့ကို တအားခြေ တာခံနရေတာ သလေုမြောပါးပဲ။ မပွောမဆိုနဲ့ ကြှနျမပါးစပျထဲကို လီရညျတှပေမျးထညျ့လိုကျတယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျဆိုတော့ ရှံလို့ ထှေးထုတျပဈလိုကျ တယျ။ သူလညျး တျောတျောမောသှားလို့ ထိုငျခုံကြောမှီကို မှီပွီးနားတယျ။
အမောပွတောနဲ့ သူ့လကျက ကြှနျမစောကျပကျထဲကို နှိုကျတော့တာပဲ။ ကြှနျမကလညျး သူ့လီးကို ပွနျကိုငျထားတယျ။ သူ့လကျရဲ့အစှမျးတှကွေောငျ့ ခဏခဏပွီးလို့ ကြှနျမဖွငျ့မွော့ပွီး စောကျစိကို ကြိနျးနတောပါပဲ။ သူလညျး ကြှနျမရဲ့ထုပေးမှုအောကျမှာ မွော့နတောပါပဲ။ ကားဆိုကျခါနီးကတြော့ သူက တိုးတိုးလေး ကပျပွောတယျ။ “မမကိုနှိပျစကျခငျြတယျ” တဲ့။ ကြှနျမလညျး သူဘယျလိုနှိတျစကျမှလဲ သိခငျြလို့ခေါငျးငွိမျ့လိုကျတယျ။ ကားလညျးဆိုကျ ရော သူက တက်ကစီတဈစီးငှါးပွီး ဟိုတယျကို မောငျးခိုငျးလိုကျတယျ။ ဆိုငျတဈဆိုငျရောကျတော့ ကြှနျမကို ကားပျေါမှာထားခဲ့ပွီး သူက ဆငျးသှားတယျ။
“ဘာသှားလုပျတာလဲ” “မမကို နှိပျစကျဖို့ ပစ်စညျးတှသှေားဝယျတာ” “ပွကွညျ့” “မပွဘူးကှာ ဟိုတယျရောကျမှကွညျ့” မပွဘူးလို့ပွောလို့ ကြှနျမက စိတျကောကျပွီး ဟိုဘကျလှညျ့တော့ သူက ကြှနျမကို အတငျးဆှဲလှညျ့တယျ။ ကြှနျမကလညျး ရုနျးတာပေါ့။ ကြှနျမပါးကိုရှတျခနဲနမျးလိုကျတော့ ကြှနျမက သူ့ကိုထုတာပေါ့။ ထုတဲ့လကျကိုဖမျးဆှဲထားပွီး ကြှနျမတဈကိုယျလုံးကို သူ့ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးလိုကျတယျ။ ကားဆရာကွညျ့နတေယျ လို့ပွောလိုကျမှ လှတျပေးတယျ။ တျောတျောဆိုးတဲ့ ကောငျဆိုးလေး။
ဟိုတယျမှာ ၂ယောကျခနျးယူလိုကျတယျ။ အစားအသောကျတှကေိုလညျး အခနျးထဲပို့ဖို့မှာခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ ရတေူတူခြိုးကွတယျ။ ရခြေိုးရငျး ကြှနျမအဖုတျ ကို ဆှတယျ နို့ကွီးတှကေိုညှဈတယျ။ လိုးတော့မလိုးပေးဘူး။ တဈလမျးလုံးဆှခံခဲ့ရတာရော ရခြေိုးရငျးဆှတာရောကွောငျ့ ကြှနျမစောကျဖုတျက တအားရှ နပွေီ။ အလိုးခံကွညျ့ခငျြလှပွီ။ ရခြေိုးပွီးတော့ကြှနျမကို ကုတငျပျေါမှာလှဲခိုငျးပွီး သူ့ဝယျခဲ့တဲ့အိတျထဲက ကွိုးခှကေိုထုတျတယျ။ လကျတဈဘကျနဲ့ ခွထေောကျတဈဘကျစီကို ပူးခညျြလိုကျတယျ။ ကြှနျမပုံစံက ခွထေောကျကွီးမွှောကျပွီး စောကျဖုတျကွီးဖွဲပီး သူလာဖို့ကို ဖိတျချေါနသေလိုပဲ။ ယောကျြား လိုးတာတဈခါမှ မခံရဖူးဘဲ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ပယျပယျနှယျနှယျ လုပျတာခံရတော့မှာဆိုတော့ ရငျတှလေညျးခုနျ ကွောကျလညျးကွောကျမိတယျ။
သူ့အိတျထဲကနေ ကွာပှတျတဈခုထုတျတယျ ညှကျလေးတှလေညျးထုတျတယျ။ ကွာပှတျက ထိပျဖြားမှာ သားရအေမှေးဖှားလေးတှပေါတယျ။ ညှကျလေး တှနေဲ့ ကြှနျမနို့သီးဖြားလေးတှကေို ညှကျတယျ။ နာတာပေါ့။ ပါးစပျကိုတိတျနဲ့ ကပျထားတော့ အျောလို့လညျးမရဘူးလေ။ ကြှနျမနို့တှကေို ကွာပှတျနဲ့ရိုကျ ပွနျတယျ။ စပျပမေဲ့ ခံစားရတာ တမြိုးလေး။ ခဏနတေော့ ကြှနျမပါးစပျကတိတျကိုခှာပေးပွီးတော့ ရလားလို့မေးတယျ။ အတှအေ့ကွုံသဈရခငျြတာရော ထနျနတေဲ့စိတျကွောငျ့ရော ရတယျလို့ပဲ ဖွလေိုကျတယျ။
“အား…..အား…..” ကြှနျမစာကျပကျကိုဖွဲဖွဲပွီး စောကျစိလေးကို ကွာပှတျနဲ့ တရှမျးရှမျးနအေောငျ မညှာမတာအဆကျမပကျြ ရိုကျတယျ။ ကြှနျမစောကျ ဖုတျလေးကို နီရဲပွီး စပျနတောပဲ။ နို့စို့စကျနှဈခုကိုယူပွီးတော့ ကြှနျမနို့တှမှောတပျတယျ။ “အိုး… ဟငျ့း….” နို့စို့စကျတှရေဲ့နို့ကို ဖိကွိတျခမြှေုကွညေငျ့ ကြှနျမစောကျပကျမှာ အရညျကွညျလေးတှေ စိမျ့လာတယျ။ “အိုး….အားလား…အား….အ….အ..” ကြှနျမစောကျစိကို ကဉျြစကျနဲ့ ဖိကပျထားတော့ ဘယျခံ နိုငျမလဲ။ အျောရတာ အသကျရှုရပျမတကျပဲ။ ခဏကွာတော့ ကြှနျမတဈကိုယျလုံး ကငျြပွီးတုနျတကျလာပွီး စောကျရညျတှထှေကျတယျ။
“ပွီးပွီ…” လို့ ကြှနျမက ပွောပမေယျ့ သူက တုနျစကျကို မဖယျပေးဘူး။ “အမလေး…ဟငျ့….ဟငျ့…. တျောပါတော့….” ကြှနျမဘယျလိုပဲ အျောအျော သူက ကြှနျမစောကျစိနဲ့ ကငျြစကျကို ကပျထားတုနျးပဲ။ စောကျရညျတှေ ခဏခဏထှကျပွီး ပွီးသှားလို့ ကြှနျမဖွငျ့အျောတောငျ မအျောနိုငျတော့ဘူး။ မွော့နပွေီ။ စောကျခေါငျးထဲကို ခုထကျထိ လီးထညျ့ပွီးမလိုးသေးဘူး။
“ကွိုးဖွညျပေးနျော… မ” “ဝူး….အာ့….အား….” ကွိုးတှဖွေညျပေးပွီးတာနဲ့ သူရိုကျလို့ နာကငျြနတေဲ့ ကြှနျမစောကျဖုတျကိုငွငျငွငျသာသာ ယကျပေးတယျ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားလေးတှကေိုလညျး တပွှတျပွှတျစုပျတယျ။ စောကျစိကို ဆှဲစုပျလိုကျတော့ စောစောက နာတာတှတေောငျ ဘယျရောကျသှားမှနျးမ သိဘူး။ ကြှနျမကလညျး အညှာလှယျလှနျးပါတယျ။ သူယကျပေးလို့သိပျမကွာခငျမှာပဲ ထပျပွီးသှားတယျ။ သူ့မကျြနှာကို စောကျရညျပူတှနေဲ့ပမျးမိတာပေါ့။
“အား…..တျောပွီ….တျောတော့…” ကြှနျမစောကျဖုတျထဲကို သူ့လီးထိုးသှငျးလိုကျတော့ အရညျတှဘေယျလောကျပဲ ရှဲနပေမေယျ့ အပြိုမွှေးက ခံနတေော့ အရမျးနာတာပဲ။ ကြှနျမက နာတယျပွောတော့ လီးကိုဆကျမသှငျးသေးဘဲ ကြှနျမနို့လေးတှကေို စို့ပေးနတေယျ။ နို့သီးထိပျမှ နို့စို့စကျတပျထားတုနျးက ကောငျးပမေယျ့ ခု လူကိုယျတိုငျစို့ပေးတာက ပိုခံလို့ကောငျးတယျ။ “အဆုံးထိထညျ့တော့ ကှာ” နို့ကို ပယျပယျနယျနယျစို့ပေးနတေော့ စောကျဖုတျက ရှ တကျလာလို့ အထဲဝငျအောငျထညျ့ခိုငျးလိုကျတယျ။
“အား…လား..” အပြိုမွှေးပေါကျသှားပွီး လီးက သားအိမျဝကို ဒုကျခနဲလာဆောငျ့တယျ။ ပွီးတာနဲ့ သူက အဆကျမပွတျဆောငျ့တော့တာပဲ။ “အား…. မောငျ လေး လိုးပေး…လိုးပေး… အိုး…. အား….အား…..” ကြှနျမရဲ့နို့ကွီးတှကေို ကိုငျဆောငျ့ဆှဲပွီး ကြှနျမစောကျဖုတျကို ဆောငျ့လိုးတာဆိုတာ စောကျဖုတျကွီး တောငျ ကှဲထှကျရမတကျပဲ။ “ကုနျးပေးအုံး မမ ” “အမလေး……” ကုနျးပေးလိုကျတာနဲ့တပွိုငျနကျ ကြှနျမအိုးကွီးတှကေို ကိုငျပွီး ဆောငျ့လိုးတယျ။ ကြှနျမ တငျပါးကိုလညျး သူ့လကျဝါးကွီးနဲ့တဖွနျးဖွနျးကို ရိုကျတာ။ ” ကြှနျတေျာ့အပျေါတကျဆောငျ့ပေးပါလား အမ ” ဘာဆေးစားထားလိုလဲတော့မသိဘူး အဲ့ဒီ ကောငျလေးရဲ့သနျခကျြကတော့။ ဆကျတိုကျလိုးနတော တဈနာရီကြျောပွီ နဲနဲမှ မကသြေးဘူး။ ကြှနျမသာ အကွိမျကွိပျမျပွီးလို့ စောကျဖုတျကို ပူထူနပွေီ။
“အား…. မမ ကောငျးလိုတာ မမရယျ မမစာကျဖုတျကွီးက အရမျးလိုးလို့ကောငျးလိုကျတာ အား…. မမ….. ကြှနျတျောပွီးတော့မယျ” ကြှနျမက အပျေါတကျ ဆောငျ့နတောကို သူက အောကျကနေ ပွနျအသားကုနျပွနျကော့ထိုးရငျး ပွီးသှားသညျ။ လီးရညျပူတှေ စောကျခေါငျးထဲ ပနျးခံလိုကျရသညျ့အရသာက ထူး လှသညျ။ “အို တျောပွီလေ” ခဏပဲနားပွီး သူက ကြှနျမစောကျခေါငျးထဲကို သူဝယျလာတဲ့ လီးတုကွီးထညျ့တယျ။ ကြှနျမက ငွငျးပမေယျ့ သူက အတငျးလုပျ တယျ။ အကွိမျကွိမျပွီးထားလို့ မွော့နတေဲ့ကြှနျမက သတျတောငျလဈခငျြနပွေီ။ လီးတုနဲ့ ကြှနျမအျောဟဈနတောမွငျပွီး သူထနျလာပွီး ကနျြမကိုတကျခှ တော့ ကြှနျမက သတျလဈသှားခဲ့ပွီ။ သူဘယျလောကျထိ ခပျကွမျးကွမျးလိုးတာကိုမသိတော့ဘူး။ ။ ပွီးပါပွီ
ကားအချိန်အကြာကြီးစီးရမှာကိုတွေးပြီး ကျွန်မရင်မောမိတယ်။ ကားစီးရင် ကျွန်မက မူးတက်တယ်လေ။ ကားထွက်ခါနီးမှ ကားပေါ်တက်ထိုင်တယ်။ ပြူတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ထားပြီး ခေါင်းကို အပြင်နဲနဲထုတ်ထားလိုက်တယ်။ ဘေးခုံက လူမရှိတေါ့ နေရတာချောင်ချောင်ချိချိပဲ ။ “အးးးး” ကားစထွက်မှလူတစ် ယောက်ပြေးတက်လာပြီး ကျွန်မ ဘေးမှာ ဝုန်းဆို ခပ်ကြမ်းကြမ်းထိုင်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ sorryပါလို့ ကျွန်မကိုတောင်းပန်တယ်။ သူ့ပုံစံကြည့်ပြီး ကျွန်မလည်း စိတ်ပြေလိုက်တာပေါ့။ မြင့်မားသောအရပ်နှင့်လိုက်ဖက်စွာ ခန္ဓာကိုယ်က ကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းသည်။ ကားမီးရောင်အောက်မှာ အသားအရည်က ဝင်းနေသည်။ ထူထဲတဲ့မျက်ခုံး နှာတံချွန်ချွန် သေသပ်တဲ့နှုတ်ခမ်း လေးထောင့်ဆန်တဲ့မေးရိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သူ့ပုံစံလေးက ကျွန်မထက် ၄နှစ် ၅နှစ် တော့ ငယ်မည်ထင်ပါသည်။ အလန်းစားလေးနဲ့တစ်ညလုံးကားတူတူစီးရမယ့်အရေးကို တွေးပြီး ကားမူးတောင်ပျောက်သွားသလိုပဲ။ ကားပေါ်မှာပြတဲ့ မြန်မာကားကို ကြည့်နေတုန်းသူက စကားစပြောလာသည်။
“ရန်ကုန်ထိလား အစ်မ” “အင်း…. မင်းရော” “ကျွန်တော်လည်း ရန်ကုန်ထိပဲ.. ဒါနဲ့ အစ်မက တစ်ယောက်ထဲလား.. ချောချောလှလှလေးတစ်ယောက်ထဲ ခရီးမသွားသင့်ဘူးဗျ” ကျွန်မမျက်လွှာချထားမိသည်။ ခပ်ချောချောကောင်လေးက ဘေးနားမှာထိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီး လှတယ်ပြောတာ ရင်မခုန်ဘဲ နေပါ့မလား။ “ကျွန်တော် အစ်မကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားပြီ အစ်မရယ်” “အို….. မဖြစ်နိုင်တာ” မိန်းမသားမို့သာ အစဉ်လာအရမူမိပေမယ့် ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်က ဒီကောင်လေး မဆွတ်ခင်က ညွတ်ချင်နေတာ။ “ယုံပါအစ်မရယ်… နော်” “အို….လွှတ်ပါ… လူတွေမြင်ကုန်လိမ့်မယ်” “လွှတ်ဖူးဗျာ ချစ်တယ် ပြောမှ လွှတ်မယ်” “အင်းကွာ…. ချစ်တယ်…. ချစ်တယ်… ကဲ… ကျေနပ်ပြီလား လူဆိုးလေး “ ကောင်လေးက မပြောမဆို ဆွဲဖက်ထားတော့ ကျွန်မဖြင့် အသက်ရှုတောင်ကြပ်တယ်။ ချစ်တယ်လို့ ဇွတ်ပြောခိုင်းတော့ ကျွန်မလိုက်လျောလိုက်ရတာပဲလေ။ နဲနဲလျော့သွားပေမဲ့ သူက ကျွန်မကိုဖက်ထားတုန်းရယ်။
“ရွှတ်” “အို… “ ကားမီးလည်းပိတ်သွားရော သူကကျွန်မပါးကိုနမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေး ဖိကိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းတစ်ခုလုံးကို စုပ်ယူပြီး သူ့လျှာလေးကို ကျွန်မပါးစပ်ထဲရောက်အောင်ထိုးထည့်တယ်။ နမ်းတာများ ကျွမ်းလိုက်တာရှင်။ လူကိုမူးမေ့ရမတက်ပဲ။ ကျွန်မက အပျိုကြီးဆိုတော့ အဲ့လို နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို ကိုရီးယားကားထဲမှာပဲ မြင်ဖူးတာလေ။ အခုကိုယ်တွေ့ဆိုတော့ ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းကြီး။ သူ့လျှာကို ကျွန်မပါးစပ်ထဲထိုးသွင်းတော့ ကျွန်မက စုပ်ယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူက ကျွန်မလျှာကိုပြန်စုပ်ယူပြန်တယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့လျှာတိုက်ပွဲမှာ ကျွန်မပဲ နွမ်းလျခဲ့ရတယ်။ သူ့လက်က အငြိမ်မ နေဘူး။ ကျွန်မရဲ့ နို့အုံတင်းတင်းလေးကို အင်္ကျီပေါ်က ပွတ်နေတယ်။ ကျွန်မက နို့ကြီးတာရော ဘော်လီအုံက ထူတာရောကြောင့် သူ့လက်နဲ့တောင် မဆန်ချင် ဘူး။
“အို…. မလုပ်နဲ့လေ” ကျွန်မရဲ့တားမြစ်သံကို ဂရုမစိုက်စွာဘဲ ကောင်ဆိုးလေးက ကျွန်မရဲ့ဘော်လီချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အင်္ကျီအောက်ကနေလ က်လျိုပြီး ဘယ်သူမှ မထိမတွေ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ နို့အုံလေးကို ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ညှစ်ပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ လက်ကြီးရဲ့ ကိုင်တွယ်မှု အောက်မှာ ကျွန်မနို့အုံလေးက ကြေမွလုမတက်။ နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း။ ငြီးသံထွက်မှာစိုးလို့ ကျွန်မနှုမ်ခမ်းကို အသေလိုက်ထားရတယ်။ ကျွန်မထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ နို့လှလှကြီးတွေကို ခုတောလည်း နာမည်တောင်မသိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် မညှာမတာကိုင်ညှစ်နေတာကို ကြည်ဖြူစွာ အကိုင် ခံနေသည်။
“အု… အား…” အသံထွက်သွားပြီးတော့မှ ကျွန်မပါးစပ်ပြန်ပိတ်လိုက်ရသည်။ မအော်ဘဲနေနိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်မရဲ့ နို့သီးသေးသေးလေးကို သူ့ရဲ့ ကြွက်သား အဖုဖုရှိတဲ့လက်ကြီးနဲ့ အားကုန်ညစ်ပစ်လိုက်တာလေ။ နာလွန်းလို့ နို့သီးလေးကို ညှစ်ချေနေတဲ့ သူ့ရဲ့လက်ကို ကျွန်မဆွဲဖယ်ပေမဲ့ သူ့လက်ကယအားသန် လွန်းတော့ မဖယ်နိုင်ဘူး။ သူက ကျွန်မနို့သီးလေးကို လက်ညှိုးလက်မနဲ့ ညှစ်ပြီး ဆွဲဆွဲပြီးချေနေသေးတယ်။ နာတယ်ထင်ပေမယ့် ကျွန်မစောက်ဖုတ်ဝဆီ က ဆစ်ကနဲ ဆစ်ကနဲ ဖြစ်ပြီး အရည်တွေ တော်တော်ရွှဲလာတယ်။ ကျွန်မရဲ့ထမိန်လေးကိုဖြည်ပြီး ကျွန်မစောက်ဖုတ်ကို စမ်းတယ်။ “ဘောင်းဘီချွတ်လိုက် နော်… မမ” ကောင်လေးရဲ့အမိန့်အတိုင်း ကျွန်မချွတ်ပေးလိုက်တော့ ကောင်လေးလက်လေးတွေက ကျွန်မရဲ့စောက်စိလေးကို ဖွဖွပွတ်ပေးတယ်။ ကားပေါ် မဟုတ်ဘဲ အခန်းတစ်ခုခုထဲသာဖြစ်လို့ကတော့ ကျွန်မကပြဲလန်နေအောင် အော်ငြီးမိမည်။ ခုတော့ လက်ကိုကိုက်ထားပြီး ကျိတ်ခံနေရသည်။
“အင့်… ဟင့်…” ကျိတ်ခံနေရင်းမှပင် အသံလေးများထွက်မိသွားသည်။ စောက်စိကို နာနာလေးဖိပွတ်ပေးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်လေးများစိမ့်ထွက် လာကာ ပြီးသွားတော့ နို့သီးလေးတွေတောင် ထောင်နေသည်။ ကောင်လေးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ကောင်လေးကိုဖက်ပြီး ကျွန်မအနားယူနေပေမယ့် ကောင်လေးရဲ့ လက်က ကျွန်မစောက်ပက်ထဲမှာ အနားမယူသေးဘူး။ ကျွန်မရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ပွတ်လိုက် ညှစ်လိုက် စောက်မွှေးလေးတွေကို ဆွဲလိုက် လုပ်နေတယ်။ လက်ခလယ်လေးကို ကျွန်မစောက်ပက်ခေါင်းထဲ ထည့်တော့ အော်မိမှာစိုးလို့ ကောင်လေးပုခုံးကိုကိုက်ထားရတယ်။ လက်လေးနဲ့ အဝင်အထွက် မှန်မှန်လုပ်ပေးတော့ စောက်ဖုတ်က မနာတော့ပဲကောင်းလာတယ်။ လက်တစ်ချောင်းကနေ နှစ်ချောင်းပူးထည့်လိုက်တော့ ကြပ်ကြပ်ထုပ် ထုပ် တစ်မျိုးလေး။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်လေးရဲ့ အဝင်အထွက်တွေက မြန်လာတယ်။ သေလေက်အောင်ကောင်းတာပါပဲ။ အဲ့ဒီနေရာတင် စောက်ပက်ကိုဖြဲပြီး ကားပေါ်က ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးဝိုင်းလိုးတာကို ခံပြစ်လိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်မပြီးသွားတော့ကောင်လးက သူ့ကို ဂွင်းထုပေးဖို့ပြောတယ်။ ကျွန်မက အပျိုကြီးဆို တော့ အဲ့ဒါတွေသိပ်မသိဘူးလေ။ ကောင်လေးက ကျွန်မလက်ကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးပေါ်ကိုတင်ပြီး သူ့လီးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ အဲ့ဒါ ဂွင်းထု တာတဲ့။ ကျွန်မလည်းစိတ်ပါလက်ပါ ထုပေးနေဖြစ်တယ်။ သူလည်း ကျွန်မလိုပဲ အော်ချင်တာကို မေးရိုးကြီးထောင်အောင် အံကြိတ်ထားတယ်။ ကျွန်မ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆောင့်လိုက်တော့ ကျွန်မနို့တွေကိုလှမ်းညှစ်ရင်း ဆက်ဆက်တုန်ကာ ပြီးသွားတော့တယ်။
ကားကပေးတဲ့စောင်လေးကို နှစ်ယောက်တူတူခြုံပြီး နားနေတုန်း ကောင်လေးက ထိုင်ခုံအောက် ကားကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မပေါင်နှစ်လုံးကိုဖြဲပီး သူ့ခေါင်းဝင်လိုက်တယ်။ ” ရှီး…..အို…..ကျွတ် ကျွတ်..” ကျွန်မစောက်ဖုတ်လေးကိုဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို မလွတ်တမ်းငုံခဲထားတာ ကျွန်မစောက်စိလေးတောင် ပြုတ်ထွက်ရမတက်ပါပဲ။ စောက်စိလေးကို သွားလေးနဲ့ ကိုက်လိုက် ချိုချဉ်လေးလိုစုပ်လိုက်လုပ်တော့ ခံရခက်လွန်းလို့ သူ့ ဆံပင်တွေကိုတောင် ဆွဲထားမိတယ်။ သူကတော့ ကျွန်မရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီးတွေကို အငမ်းမရစုပ်နေစဲ။ အသံမြည်အောင်ယက်ဘဲ စောက်ဖုတ်ကို ဖိဖိယက်တော့ သူ့မေးစေ့ကအမွှေးငုတ်စိလေးတွေက ကျွန်မစောက်ဖုတ်တပြင်လုံး ယားကျိကျိဖြစ်လာတယ်။ သူ့လျှာလေးကိုလည်း ကျွန်မ စော်ခေါင်းထဲ ထိုးထိုးသွင်းတယ်။ ကော့ပြန်နေအောင် ကောင်းတာပါပဲ ။ကားပေါ်မှာ အသံမထွက်ရဲတော့ သူ့ဆံပင်တွေကို နာနာဆွဲမိတာပေါ့။
” အို….” ကျွန်မက ဆွဲဖယ်ပေမယ့် သူကမဖယ်တော့ ကျွန်မစောက်ရည်တွေ သူ့မျက်နှာကိုပမ်းလိုက်မိတယ်။ သူ့မျက်နှာပေါ်က ကျွန်မရဲ့စောက်ရည်ပူတွေကို တစ်ရှုးလေးနဲ့ ယုယုယယသုတ်ပေးနေတုန်း သူက ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲနမ်းပြီး နို့သီးဖျားလေးကို ညစ်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကားမီးက လင်းလာ တယ်။ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းရောက်လို့ နားတာပေါ့။ သူရော ကျွန်မရော ကားပေါ်ကဆင်းပြီး အစားစားကြတယ်။ ကားပေါ် လူတွေအားလုံးတက်ပြီး ကားစ ထွက်တော့ မီးမှိတ်သွားတာနဲ့ ကောင်လေးရဲ့လက်တွေက ကျွန်မနို့တွေပေါ်ကို ရောက်လာတော့တာပဲ။ ကျွန်မလက်ကိုလည်း သူ့လီးပေါ်ကို တင်ပေးတယ်။ သူတောင် ကျွန်မကို ယက်ပေးသေးတာပဲဆိုပြီး ကျွန်မလည်းရှက်မနေတော့ဘဲ ထိုင်ခုံပေါ်ကဆင်း အောက်မှာထိုင်ပြီး သူ့လီးကို စုပ်ပေးတာပေါ့။
ကျွန်မက သိပ်မလုပ်တက်ပေမယ့် သူကတော့ ဖီးတက်ပြီး မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လို့။ သူကောင်းတယ်ဆိုတော့ နာနာလေးဖိစုပ်ပေးတယ်။ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲ ဝင်သလောက်သွင်းပြီးစုပ်တယ်။ လီးထစ်လေးကို လျှာနဲ့ ပွတ်ဆွဲတယ်။ လီးရည်တွေ စိုရွှန်းနေတဲ့ သူ့လီးထိပ်လေးနဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းလေးကို နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးသလို ပွတ်တယ်။ “အား…….” အော်လိုက်မိတာ ကျွန်မ။ ကျွန်မတုန်းက သူ့ဆံပင်ဆွဲသလို သူလည်း ကျွန်မရဲ့ တင်ပါးဖုံးအောင်ရှည်တဲ့ဆံပင် ကို သူ့လက်နဲ့ တင်းနေအောင်ရစ်ကိုင်ထားတော့ နာတာပေါ့။ ပြီးတော့ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်မနို့အုံကြီးကို တအားညစ်နေသေးတယ်။ ဘယ်သူမှ မ ကိုင်ဖူးတဲ့ အပျိုနို့အုံတင်းတင်းအိအိလေးကို သူ့ဗလကြီးနဲ့ မညှာမတာညှစ်ချေနေတာခံရတာ တချက်တချက် အသက်ရှုရပ်သွားမတက်ပဲ။
စောစောက သူ့လီးကို ကျွန်မက စုပ်ပေးတာ။ အခုသူက လီးကိုကော့ကောထိုးပြီး ကျွန်မပါးစပ်ကို လိုးနေတာ။ သူ့လီးကြီးကရှည်တော့ ကျွန်မအာခေါင်ကို ထောက်ထောက်မိတာ မျက်ရည်တောင် ဝိုင်းတယ်။ သူ့အားကြီးကသန်တော့ ရုန်းလို့လည်း မရဘူး။ ဆံပင်ဆောင့်ဆွဲပြီးပါးစပ်ကိုဆောင့်လိုး နို့ကို တအားချေ တာခံနေရတာ သေလုမျောပါးပဲ။ မပြောမဆိုနဲ့ ကျွန်မပါးစပ်ထဲကို လီရည်တွေပမ်းထည့်လိုက်တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့ ရွံလို့ ထွေးထုတ်ပစ်လိုက် တယ်။ သူလည်း တော်တော်မောသွားလို့ ထိုင်ခုံကျောမှီကို မှီပြီးနားတယ်။
အမောပြေတာနဲ့ သူ့လက်က ကျွန်မစောက်ပက်ထဲကို နှိုက်တော့တာပဲ။ ကျွန်မကလည်း သူ့လီးကို ပြန်ကိုင်ထားတယ်။ သူ့လက်ရဲ့အစွမ်းတွေကြောင့် ခဏခဏပြီးလို့ ကျွန်မဖြင့်မြော့ပြီး စောက်စိကို ကျိန်းနေတာပါပဲ။ သူလည်း ကျွန်မရဲ့ထုပေးမှုအောက်မှာ မြော့နေတာပါပဲ။ ကားဆိုက်ခါနီးကျတော့ သူက တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောတယ်။ “မမကိုနှိပ်စက်ချင်တယ်” တဲ့။ ကျွန်မလည်း သူဘယ်လိုနှိတ်စက်မှလဲ သိချင်လို့ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ်။ ကားလည်းဆိုက် ရော သူက တက္ကစီတစ်စီးငှါးပြီး ဟိုတယ်ကို မောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်တော့ ကျွန်မကို ကားပေါ်မှာထားခဲ့ပြီး သူက ဆင်းသွားတယ်။
“ဘာသွားလုပ်တာလဲ” “မမကို နှိပ်စက်ဖို့ ပစ္စည်းတွေသွားဝယ်တာ” “ပြကြည့်” “မပြဘူးကွာ ဟိုတယ်ရောက်မှကြည့်” မပြဘူးလို့ပြောလို့ ကျွန်မက စိတ်ကောက်ပြီး ဟိုဘက်လှည့်တော့ သူက ကျွန်မကို အတင်းဆွဲလှည့်တယ်။ ကျွန်မကလည်း ရုန်းတာပေါ့။ ကျွန်မပါးကိုရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်တော့ ကျွန်မက သူ့ကိုထုတာပေါ့။ ထုတဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီး ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။ ကားဆရာကြည့်နေတယ် လို့ပြောလိုက်မှ လွှတ်ပေးတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကောင်ဆိုးလေး။
ဟိုတယ်မှာ ၂ယောက်ခန်းယူလိုက်တယ်။ အစားအသောက်တွေကိုလည်း အခန်းထဲပို့ဖို့မှာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ရေတူတူချိုးကြတယ်။ ရေချိုးရင်း ကျွန်မအဖုတ် ကို ဆွတယ် နို့ကြီးတွေကိုညှစ်တယ်။ လိုးတော့မလိုးပေးဘူး။ တစ်လမ်းလုံးဆွခံခဲ့ရတာရော ရေချိုးရင်းဆွတာရောကြောင့် ကျွန်မစောက်ဖုတ်က တအားရွ နေပြီ။ အလိုးခံကြည့်ချင်လှပြီ။ ရေချိုးပြီးတော့ကျွန်မကို ကုတင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းပြီး သူ့ဝယ်ခဲ့တဲ့အိတ်ထဲက ကြိုးခွေကိုထုတ်တယ်။ လက်တစ်ဘက်နဲ့ ခြေထောက်တစ်ဘက်စီကို ပူးချည်လိုက်တယ်။ ကျွန်မပုံစံက ခြေထောက်ကြီးမြှောက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးဖြဲပီး သူလာဖို့ကို ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲ။ ယောက်ျား လိုးတာတစ်ခါမှ မခံရဖူးဘဲ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် လုပ်တာခံရတော့မှာဆိုတော့ ရင်တွေလည်းခုန် ကြောက်လည်းကြောက်မိတယ်။
သူ့အိတ်ထဲကနေ ကြာပွတ်တစ်ခုထုတ်တယ် ညှက်လေးတွေလည်းထုတ်တယ်။ ကြာပွတ်က ထိပ်ဖျားမှာ သားရေအမွှေးဖွားလေးတွေပါတယ်။ ညှက်လေး တွေနဲ့ ကျွန်မနို့သီးဖျားလေးတွေကို ညှက်တယ်။ နာတာပေါ့။ ပါးစပ်ကိုတိတ်နဲ့ ကပ်ထားတော့ အော်လို့လည်းမရဘူးလေ။ ကျွန်မနို့တွေကို ကြာပွတ်နဲ့ရိုက် ပြန်တယ်။ စပ်ပေမဲ့ ခံစားရတာ တမျိုးလေး။ ခဏနေတော့ ကျွန်မပါးစပ်ကတိတ်ကိုခွာပေးပြီးတော့ ရလားလို့မေးတယ်။ အတွေ့အကြုံသစ်ရချင်တာရော ထန်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ရော ရတယ်လို့ပဲ ဖြေလိုက်တယ်။
“အား…..အား…..” ကျွန်မစာက်ပက်ကိုဖြဲဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို ကြာပွတ်နဲ့ တရွှမ်းရွှမ်းနေအောင် မညှာမတာအဆက်မပျက် ရိုက်တယ်။ ကျွန်မစောက် ဖုတ်လေးကို နီရဲပြီး စပ်နေတာပဲ။ နို့စို့စက်နှစ်ခုကိုယူပြီးတော့ ကျွန်မနို့တွေမှာတပ်တယ်။ “အိုး… ဟင့်း….” နို့စို့စက်တွေရဲ့နို့ကို ဖိကြိတ်ချေမှုကြေညင့် ကျွန်မစောက်ပက်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်လာတယ်။ “အိုး….အားလား…အား….အ….အ..” ကျွန်မစောက်စိကို ကျဉ်စက်နဲ့ ဖိကပ်ထားတော့ ဘယ်ခံ နိုင်မလဲ။ အော်ရတာ အသက်ရှုရပ်မတက်ပဲ။ ခဏကြာတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး ကျင်ပြီးတုန်တက်လာပြီး စောက်ရည်တွေထွက်တယ်။
“ပြီးပြီ…” လို့ ကျွန်မက ပြောပေမယ့် သူက တုန်စက်ကို မဖယ်ပေးဘူး။ “အမလေး…ဟင့်….ဟင့်…. တော်ပါတော့….” ကျွန်မဘယ်လိုပဲ အော်အော် သူက ကျွန်မစောက်စိနဲ့ ကျင်စက်ကို ကပ်ထားတုန်းပဲ။ စောက်ရည်တွေ ခဏခဏထွက်ပြီး ပြီးသွားလို့ ကျွန်မဖြင့်အော်တောင် မအော်နိုင်တော့ဘူး။ မြော့နေပြီ။ စောက်ခေါင်းထဲကို ခုထက်ထိ လီးထည့်ပြီးမလိုးသေးဘူး။
“ကြိုးဖြည်ပေးနော်… မ” “ဝူး….အာ့….အား….” ကြိုးတွေဖြည်ပေးပြီးတာနဲ့ သူရိုက်လို့ နာကျင်နေတဲ့ ကျွန်မစောက်ဖုတ်ကိုငြင်ငြင်သာသာ ယက်ပေးတယ် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကိုလည်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တယ်။ စောက်စိကို ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ စောစောက နာတာတွေတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမ သိဘူး။ ကျွန်မကလည်း အညှာလွယ်လွန်းပါတယ်။ သူယက်ပေးလို့သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ထပ်ပြီးသွားတယ်။ သူ့မျက်နှာကို စောက်ရည်ပူတွေနဲ့ပမ်းမိတာပေါ့။
“အား…..တော်ပြီ….တော်တော့…” ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လီးထိုးသွင်းလိုက်တော့ အရည်တွေဘယ်လောက်ပဲ ရွှဲနေပေမယ့် အပျိုမြှေးက ခံနေတော့ အရမ်းနာတာပဲ။ ကျွန်မက နာတယ်ပြောတော့ လီးကိုဆက်မသွင်းသေးဘဲ ကျွန်မနို့လေးတွေကို စို့ပေးနေတယ်။ နို့သီးထိပ်မှ နို့စို့စက်တပ်ထားတုန်းက ကောင်းပေမယ့် ခု လူကိုယ်တိုင်စို့ပေးတာက ပိုခံလို့ကောင်းတယ်။ “အဆုံးထိထည့်တော့ ကွာ” နို့ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်စို့ပေးနေတော့ စောက်ဖုတ်က ရွ တက်လာလို့ အထဲဝင်အောင်ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။
“အား…လား..” အပျိုမြှေးပေါက်သွားပြီး လီးက သားအိမ်ဝကို ဒုက်ခနဲလာဆောင့်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ သူက အဆက်မပြတ်ဆောင့်တော့တာပဲ။ “အား…. မောင် လေး လိုးပေး…လိုးပေး… အိုး…. အား….အား…..” ကျွန်မရဲ့နို့ကြီးတွေကို ကိုင်ဆောင့်ဆွဲပြီး ကျွန်မစောက်ဖုတ်ကို ဆောင့်လိုးတာဆိုတာ စောက်ဖုတ်ကြီး တောင် ကွဲထွက်ရမတက်ပဲ။ “ကုန်းပေးအုံး မမ ” “အမလေး……” ကုန်းပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ကျွန်မအိုးကြီးတွေကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်လိုးတယ်။ ကျွန်မ တင်ပါးကိုလည်း သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့တဖြန်းဖြန်းကို ရိုက်တာ။ ” ကျွန်တော့်အပေါ်တက်ဆောင့်ပေးပါလား အမ ” ဘာဆေးစားထားလိုလဲတော့မသိဘူး အဲ့ဒီ ကောင်လေးရဲ့သန်ချက်ကတော့။ ဆက်တိုက်လိုးနေတာ တစ်နာရီကျော်ပြီ နဲနဲမှ မကျသေးဘူး။ ကျွန်မသာ အကြိမ်ကြိပ်မ်ပြီးလို့ စောက်ဖုတ်ကို ပူထူနေပြီ။
“အား…. မမ ကောင်းလိုတာ မမရယ် မမစာက်ဖုတ်ကြီးက အရမ်းလိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ အား…. မမ….. ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်” ကျွန်မက အပေါ်တက် ဆောင့်နေတာကို သူက အောက်ကနေ ပြန်အသားကုန်ပြန်ကော့ထိုးရင်း ပြီးသွားသည်။ လီးရည်ပူတွေ စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းခံလိုက်ရသည့်အရသာက ထူး လှသည်။ “အို တော်ပြီလေ” ခဏပဲနားပြီး သူက ကျွန်မစောက်ခေါင်းထဲကို သူဝယ်လာတဲ့ လီးတုကြီးထည့်တယ်။ ကျွန်မက ငြင်းပေမယ့် သူက အတင်းလုပ် တယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ပြီးထားလို့ မြော့နေတဲ့ကျွန်မက သတ်တောင်လစ်ချင်နေပြီ။ လီးတုနဲ့ ကျွန်မအော်ဟစ်နေတာမြင်ပြီး သူထန်လာပြီး ကျန်မကိုတက်ခွ တော့ ကျွန်မက သတ်လစ်သွားခဲ့ပြီ။ သူဘယ်လောက်ထိ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးတာကိုမသိတော့ဘူး။ ။ ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကားပျေါက ကောငျဆိုးလေး
အဲဒီအနံ့ကို ကြုပျ ကွိုကျတာ